लौ, अच्म!!! मध्यरातमा यस्तो अवस्थामा पुगे अस्पताल (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepalaja
लौ, अच्म!!! मध्यरातमा यस्तो अवस्थामा पुगे अस्पताल (भिडियो हेर्नुस्)
February 13, 2021 60
दाङमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । एक जना २७ वर्षका युवकको सम्पर्क राख्दै गर्दा गोप्य अंङ भाँ’चि’एपछि सफल शल्यकृया गरिएको छ । मध्यरातमा श्रीमतीसंग सम्पर्क राखेका पुरुषलाई यस्तो घटना भएको हो ।
डाक्टरको शल्यकृया गरेका चिकित्सकले यस्तो घटना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि खुलाएका छन् । अस्वभावीक आसनमा सम्बन्ध गर्दा यस्तो समस्या आउने चिकित्कसकले जनाएका छन् । यस्तो घटना निकै विरलै
हुने गरेको र तत्काल उपचार भए निको हुने बताएका छन् । तत्काल उपचार नगरे त्यसले अंगमा समस्या आउने पनि चिकित्सकले सुझाएका छन् । त्यस्तो कुनै समस्या आए ला जका कारण चिकित्सकसंग सल्लाह नगरे अन्य समस्या आउने बताएका छन् ।
Prev६ सय जना महिला तथा युवतीहरु विवाहको लागि पुरुष नपाए पछि सामुहिकक रुपमा पुरुषको खोजी!!
Nextछिटो हेर्नुहोस,सपनालाई फ’साउन यती ठुलो ष’ड्यंत्र, बल्ल भेटियो यती ठुलो प्र’माण ( पुरा भिडियो सहित )
स्वेता खड्काले पाइन् धोका ! सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै गरिन् यस्तो सहयोगको अपिल